Hay’adda qaxootiga Qaramada Midoobay oo Tansaaniya ku ammaantay kaalinteeda firfircoon - Sabahionline.com
Hay’adda Qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay (UNHCR) ayaa Tansaaniya ku ammaantay sida ay gabbaad u siisay qaxootiga ka soo jeeda gobolka iyo sida ay uga shaqeeyso arrimaha nabadda iyo xasilloonida, sidaana waxaa isniintii (25-ka June) qoray The Guardian-ka Tansaaniya.
Tansaaniya oo yareeynaysa ciyaalka darbiyo-jiifka ah
Qaabka ku dhisan firfircoonaanta ee ay wax uga qabato dhibaatooyinka ay keenaan qaxootigu waxa uu gacan ka gaystay in ay hoos-u-dhacdo tirada qaxootiga ku nool Tansaaniyo oo ay gaarto 134,940 iyada oo 500,000-na ay ku noqdeen guryahoodii sidaana waxa sheegay sii hayaha xafiiska ay UNCHR ku leedahay Tansaaniya Chansa Kapya oo ka hadlayay xaflad lagu maamuusayay Maalinta Qaxootiga Adduunka oo ka dhacay Darusalaam todobaadkii hore.
Kapaya ayaa ku ammaanay go'aankii ay dowladda sanadkii 2010-ki ku nafaqeysay 162,000 oo qaxooti reer Burundi ah kuwaasoo Tansaaniya dagganaa kudhowaan 40 sano. Xiriiriyaha xafiisyada Qaramada Midoobay ee Tansaaniya Albert Kacou ayaa xoogga saaray ahamiyadda ay leedahay in waddamadu magan-galyo u fidiyaan dadka soo barakaca sida Tansaaniya oo kale.
"Mas'uuliyadda ah in gargaar loo noqdo qaxootiga waa mid la wadaago, kaliya ma ahan in ay lagama maarmaan tahay, laakiin sidoo kale waa waxa ugu saxsan ee la qabto." ayuu yiri. “Waa in aannu isku kaashannaa sidii aan u dumi lahayn rabitaanka siyaasadeed iyo kan hoggaamineed ee ku aaddan sidii looga hortagi lahaa loona dhamayn lahaa colaadaha oo iyagu dhaliya qaxootiga."